Niara-niasa nandritra ny 10 taona mahery: « Tsotra sy malemy fanahy Ramahafadrahona », hoy i Dadafara - ewa.mg
Niara-niasa nandritra ny 10 taona mahery: « Tsotra sy malemy fanahy Ramahafadrahona », hoy i Dadafara
News - Niara-niasa nandritra ny 10 taona mahery: « Tsotra sy malemy fanahy Ramahafadrahona », hoy i Dadafara
“Raha teo amin’ny tontolon’ny
kolontsaina, iray amin’ireo olona akaiky an-dRamahafadrahona aho”,
hoy Ramilson Dadafara, omaly. Raha ny nambarany, tao anatin’ny 10
taona eo ho eo no niarahan’izy ireo nanolotra ny fandaharana momba
ny hiragasy tao amin’ny Radio Madagasikara (RNM). Ramahafadrahona
rahateo no tompon’andraikitra sy nanatontosa io fandaharana io.
“Tao anatin’izay fotoana naharitra izay, ireto toetra ireto no
hitako sy tsapako tao amin-dRamahafadrahona. Olona be fitiavana,
tia fihavanana, tsotra sy malemy fanahy ary mora mifandray
aman’olona”, hoy hatrany i Dadafara. Nohamafisiny fa “ anisan’ny
nahafinaritra ahy taminy dia ilay fandalana ny kolontsaina malagasy
nentim-paharazana. Tena tiany io”.
Nambaran’i Dadafara fa anisan’ny
manome torohevitra olona maro Ramahafadrahona. Ataony am-pitiavana
izany hany ka satry hihaino azy foana. Manana talenta amin’ny
fitantarana ny zava-misy rahateo izy. “Iray amin’ireo tena
nahaliana ahy tamin’ireo notantarainy, ohatra, ny fizotran’ireo
seho nataony tany ivelany. Nambaran-dRamahafadrahona tamiko
tamin’izany fa marobe tokoa ny vahiny no liana sy voasariky ny
vakodrazana malagasy”, hoy hatrany i Dadafara Hiragasy.
Raha ny fijoroana vavolombelona
nataon’i Dadafara, marobe ireo nandray sy nanovo soa
tamin-dRamahafadrahona teo amin’ny tontolon’ny kanto.
L’article Niara-niasa nandritra ny 10 taona mahery: « Tsotra sy malemy fanahy Ramahafadrahona », hoy i Dadafara a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 22/09/2020
Tontolon’ny Rap gasy: hiverina indray i Noum’s Montana
Efa ao anaty ilay zavakanto ka tsy azo ampanginina na totorana. Anisan’ny miaina izany ihany koa i Noum’s Montana. Ho azy, mbola maro ny tanjona manoloana ny tontolon’ny rap gasy …Nomena Nantenaina Andriamaromanebo na i Noum’s Montana, no tena ahafantaran’ny maro azy eo amin’ny tontolon’ny mozika. Tao Antsirabe, tanàna nahalehibe azy rahateo no nitsirian’ny talentany voalohany ka nirosoany teo amin’ny tontolon’ny rap. Ankehitriny efa eto Antananarivo izy. Ny vondrona ”zaza mainty” tao Antsirabe no nisy azy tamin’ny voalohany fa rehefa niakatra taty Antananarivo, nisafidy ny andeha irery ny lehilahy.“Rehefa somary tsy henoheno kely teo dia hiverina indray satria somary sahirana tamin’ny fianarana teny amin’ny Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo aho. Ny tena tanjona amin’ny ilay fanaovana mozika rap, ny hanabeazana sy hampitana fomba fijery manokana amin’ny lafim-piainana maro samihafa. Izany hoe, amin’ny alalan’ ilay zavakanto ataoko no ampitako hevitra”, hoy i Noum’s Montana.Miezaka mampivelatra sy mampahafantatra ny talentanyAnisan’ny hira nahafantarana an’i Noum’s Montana ny ”Raha Mozika” niarahana tamin’i Ndoas, izay manazava sy mamaritra ny mozika ataony amin’ny ankapobeny. Teo ihany koa ny hira ”Ny kolontsaiko” niarahana tamin-dry Doublenn, Psykopasy, Buddha El Taga”, izay manazava sy mamaritra ny fandraisany ny tontolon’ny zavakanto na ny kolontsaina Hip Hop. Mbola rakikira « audio » daholo hatreto fa tsy mbola misy rindrantsary.“Ankehitriny, tena miroborobo fatratra sy mivelatra hatrany ny mozika rap. Fa olana ny eo amin’ny resaka haino aman-jery amin’ny fandefasana ny sanganasa. Soa ihany fa nisy ny “facebook” sy ny karazan-tambajotran-tserasera izarana ny mozika”, araka ny nambarany.NarilalaL’article Tontolon’ny Rap gasy: hiverina indray i Noum’s Montana a été récupéré chez Newsmada.
Asa ratsy tany Toamasina :: Voasambotra ilay mpiambina namono telo mianaka
Telo volana aty aoriana, tra-tehaka ny olona voarohirohy tamin’ny fanafihana niharo famonoana olona telo mianaka, tany Vohitsara Toamasina, tamin’ny 13 mey lasa teo. Voasambotra tany Ambodibonara Mahanoro, omaly, ilay mpiambina voatondro ho tompon’antoka voalohany tamin’io asa ratsy io. Tratra tamin’ny zoma lasa teo ny vadiny sy ny lehilahy iray hafa niray tsikombakomba taminy. Tsiahivina fa teratany frantsay sy ny vadiny teratany malagasy ary ny zanak’izy ireo, fito taona, ireo namoy ny ainy tao Vohitsara Toamasina. Tao amin’ny trano fidiovana no nahitana ny vatana mangatsiakan’izy ireo efa simba, tamin’ny alatsinainy 13 mey. Nokarohina nanomboka teo ny mpiambina izay noahiahiana voalohany. Mitohy ny famotorana an’ireto voasambotra. L’article Asa ratsy tany Toamasina :: Voasambotra ilay mpiambina namono telo mianaka est apparu en premier sur AoRaha.
Betsaka ny tanora vao afaka bakalorea no tsy mahafantatra akory ny tena marina ambadiky ireny fianarana ambaratonga ambony tsy miankina amin’ny fanjakana milaza fa “habilité par l’Etat”. Diso ny filazana hoe: “université habilitée par l’Etat” fa formation(s) habilitée(s) par l’Etat no fiteny. Tamin’ny mbola tsy nampiasa ny LMD no lazaina fa “agrée” na “homolguée ilay oniversite. Ankehitriny kosa, raha mampiasa ity rafi-pampianarana vaovao ity izy, ny lalam-piofanana isaky ny diplaoma no hankatoavin’ny fanjakana. “Ny lalam-piofanana isan-tsokajiny no mahazo fankatoavana avy any amin’ny ministeran’ny fampianarana ambaratonga ambony fa tsy ny oniversite velively”. Ny diplaoma isaky ny lalam-piofanana no mahazo fankatoavana. Manomboka amin’ny Licence izany, Master, ary Doctorat. Be dia be anefa ny oniveriste tsy miankina no mampiasa ny fankatoavana ny lalam-piofanana iray ho an’ny sampam-pianarana rehetra dia lazaina fa “habilitée par l’Etat”. Ny tena zava-doza, raha diplaoma Licence ihany no nahazoana fankatoavana dia entina handresen-dahatra ny mpianatra fa afaka manome diplaoma Master sy Doctorat ihany koa ilay ivom-pampianarana. Eto dia efa voafitaka ny mpianatra. Tsy fitia te hanakiana fa miteraka voka-dratsy ho an’ny mpianatra ny famitahana tahaka izany. Betsaka amin’izy ireo anefa no tsy mahalala fa tsy maintsy mandalo komity nasionaly momban’ny fankatoavana na Conseil national de habilitations (CNH) ny famoahana didy manome alalana hampianatra ilay lalam-piofanana. Mitaky andraikitra goavana ho an’ny oniversite izany avy eo. Anisan’ny fepetra takiana izao fa tsy maintsy mpampianatra manana diplaoma Master no mampianatra ny mpianatra L1,L2,L3 izany hoe: ireo haka Licence. Torak’izay ihany koa ny ao amin’ny sokajy manaraka, tsy maintsy manana Doctorat vao afaka mampianatra ankizy haka Master… Raha jerena anefa ny salan’isa, firy amin’ireo oniversite no mampihatra izany? Matoa napetraka izany fenitra izany dia ny fahafenon’ny fahaizana hampitaina amin’ireo tanora no tanjona. Tsy mahagaga raha mitotongana ny fari-pahaizan’ireo tanora vao vita fianarana eto Madagasikara satria mpampianatra mitovy kilasy aminy aza no nampianatra azy. Misy mihitsy aza mbola ambany diplaoma amin’izy ireo. Rehefa tonga eny amin’ny sehatry ny asa, hita amin’izay ny lavaka. Tokony hisy ny fanaraha-maso ataon’ny Ministera voakasika mba tsy hitrangan’izany intsony . Ary tokony hanadihady tsara ireo mpianatra fa tsy sodokan’ny “habilité par l’Etat” fotsiny. Mila mieritreritra ihany koa ireo oniversite fa tsy atao fitadiavam-bola fotsiny no atao fa tokony hitsinjo ny ho avin’ireo mpianatra Malagasy. Nirina R. Cet article FIANARANA AMBARATONGA AMBONY TSY MIANKINA: Misy oniversite mampiasa ny fankatoavana lalam-piofanana iray ho an’ny sampam-pianarana rehetra. est apparu en premier sur déliremadagascar.
Fizarana an’i Vatovavy sy i Fitovinany: niarahan’ny ampanjaka sy ny filoha novahana ny olana
An-dalana ny fametrahana ny faritra faha-23 ary noporofoin’ny filoha ny maha raiamandreny azy. Nihaino ny hetaheta eny ifotony amin’ny fametrahana ny faritra faha-23, amin’ny fizarana ho faritra roa : Vatovavy sy i Fitovinany ny filoha Rajoelina Andry. Nihaona sy nitafa mivantana amin’ireo ampanjaka sy raiamandreny, olobe sy depiote ary ben’ny Tanàna miaraka amin’ireo vahoaka tany amin’ireo faritra ireo ny tenany, ny faran’ny herinandro teo. Tolokevitry ny filoha ny samy hananan’ny faritra roa distrika telo avy ka ho an’i Vatovavy ny distrikan’i Manakara, Vohipeno ary Ikongo. Ho an’ny any Fitovinany kosa ny distrikan’i Nosy Varika sy Mananjary ary Ifanadina. Nifaneken’ny rehetra koa fa hiaraka amin’ny any Manakara ny kaominin’i Namorona. “Marina ny fangatahanareo satria akaiky kokoa ny ao Manakara ianareo rehefa dinihina ny saritany. Afaka amboarina ny lalana. Naneho ny faniriany momba ny fikarakarana taratasim-panjakana koa ny vahoaka fa akaiky azy ireo i Manakara”, hoy ny filoha tao Namorona. Nanome toky ireo ampanjaka ny tenany fa ho avy ny fitaovana fanamboaran-dalana. Hapetraka ny fotodrafitrasa samihafa ary hamboarina hatao trano vato ny “Tranobe”.Nahazo fanomezana ireo ampanjaka…Hasiana jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro ny tanàna rehetra. hatsaraina ny hopitaly ary hametrahana “Maternité” sy atao maoderina, ahitana trano fitarafana sy fandidiana izany. Toy izany koa ny sekoly hatao manara-penitra. Hapetraka ny borigadin’ny zandary, hanafoanana ny halatra lavanila sy jirofo. Notoloran’ny filoha fanomezana koa ireo Menalamba dimy mirahalahy sy ireo Ampanjaka miisa 49.Efa nialohavan’ny fitsidihana ny tany Mananjary, namangiana ny foibe fitaizana zaza kambana” Centre Tsy manary Zaza” ao Ambatolambo ny tenany.Etsy an-daniny, tsy maintsy hovitaina ny hopitaly manara-penitra ao Manakara ary hahazo fitaovana : “Scanner, mammographie, radiographie numérique” ny hopitaly rehefa vita. Efa nomena « Concentrateur d’oxygène” sy « Ambulance médicalisée » koa ny distrikan’i Manakara. Nisitraka Vatsy tsinjo koa ireo tokantrano miisa 1000 ho fanombohana ary hahazo vola Tosika fameno 100.000 Ar kosa ny iray ampahefatry ny tokantrano ao Manakara.Synèse R. L’article Fizarana an’i Vatovavy sy i Fitovinany: niarahan’ny ampanjaka sy ny filoha novahana ny olana a été récupéré chez Newsmada.
« Alefa depiote a!!! »
Kolikoly, fizarana vola amin’ny « malety », kinamanamana, tsy fahazotoana mamonjy fivoriana, fanararaotam-pahefana, tsy fanaovana tatitra any amin’ny vahoaka sy ny faritra nahavoafidy azy… Lava ny lisitra. Santionan’ny endrika ratsy nampalaza ny solombavambahoaka sy ny Antenimierampirenena ireo. Raha avadika amin’ny fomba hafa izay nambaran-dRtoa Razanamahasoa Christine solombavambahoaka, voafidy tany Ambatofinandrahana, zokiolona nitarika ny fivoriana voalohany, teny Tsimbazaza, omaly, very hasina tokoa ity andrimpanjakana lehibe eto amin’ny firenena, manaraka ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), ity.Fanamby goavana ny nambarany, nandritra ny kabariny omaly: ny hampakatra ny hasin’ny Antenimierampirenena. Anisan’ny tsara toerana “hiteronterona” eo amin’ny toeran’ny filohan’ity andrimpanjakana ity rahateo ny tenany, raha ny toerana sy ny lanjan’ny antoko misy azy. Solombavambahoaka avy amin’ny antoko maro anisa mpanohana ny fitondrana ny tenany. Tsy vitan’izay, kandidà tokana amin’ity fifidianana ho filohan’ny antenimera ity ny tenany. Tsy azo ihodivirana, araka izany, ny hahalany an’i Totoa Krisy (araka ny fiantsoan’ny olona azy) ho filoha, hitarika ireo solombavambahoakan’i Madagasikara miisa 151.Ny ho tena solombavambahoaka, hitondra ny feon’ny vahoaka, hiady ho amin’ny tombontsoam-bahoaka fa tsy ho an’ny tenany na ny antokony ihany, ny fanajana ny demokrasia marina fa tsy hifampiandany, tsy ho lany andro hifampitsikera,… Tsy misy hitondra ho amin’ny tena fampandrosoana ny firenena izany. Izany sy izay rehetra tsy voatonona no andrasana sy andrandrain’ny vahoaka amin’ny solombavambahoaka. Koa arahaba soa, arahaba tsara raha hanana fahavononana ho amin’izany tokoa ireto olom-boafidy mpanao lalàna ireto. Efa hisy rahateo koa eny Tsimbazaza, raha tsy misy ny sampona ny vondrona parlemantera mpanohitra. Hahatsara zavatra izany satria hisy tokoa ny fifandanjan-kery, hahamarin-toerana ny demokrasia eto amin’ity firenentsika ity. Indrindra ao anatin’izao rivo-baovaon’ny fampiraisana sy fampihavanam-pirenena nentin’ny Barea farany teo ireny. “Alefa depiote, alefa Totoa Krisy a !!!”Randria L’article « Alefa depiote a!!! » a été récupéré chez Newsmada.
Rallye Motul FMMSAM: nandresy i Bona sy i Ny Anjara
Norombahin’ny ekipazin’ny Fmmsam sy Asacm, nahitana an’i Bona sy i Ny Anjara, nitondra ny fiara Subaru Impreza, ny “rallye Motul”, nokarakarain’ny klioba Fmmsam. Dingana faharoa, amin’ny fifaninanam-pirenena, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara. Tombony ho azy ireo, ny fahaizany nitazona ny fotoana tsara efa azony, teo amin’ireo “ES” natao ny andro farany. Tontosan’izy ireo , tao anatin’ny 1 ora 48 mn 17, 3 s ny fifaninanana, tamin’ity.Faharoa, nanaraka azy ireo, i Fred sy i A.T, mpanamorin’ny klioba Asacm, nitondra ny fiara Subaru Impreza. Tara, 1 mn tamin-dry Bona ireto ekipazy ireto, satria 1 ora 49 mn 59, 2 s ny fe-potoany, tamin’ity.Fahatelo, i Teddy sy Hermann avy amin’ny klioba FMMSAM, nitondra ny fiara Ford Ranger, nahavita ny hazakazaka tao anatin’ny 1 ora 50 mn 38, 8 s. Fahefatra, i Davonjy sy Tsilavo, niaraka tamin’ny fiara Foton Tunlands, 1 ora 50 mn 44, 4 s ary fahadimy Haja D sy i Rivo, 1 ora 52 mn 29, 6 s. Dingana manaraka ny rallye karakarain’ny klioba Asacm, hatao ny 14, 15, 16 jona, ho avy izao. Torcelin L’article Rallye Motul FMMSAM: nandresy i Bona sy i Ny Anjara a été récupéré chez Newsmada.
Maroantsetra: nidoboka am-ponja ireo roa lahy nisandoka nanala bakalorea
Taorian’ny fakana am-bavany azy ireo teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana, naiditra vonjimaika am-ponja ao Maroantsetra ireo roa lahy nisandoka ho mpanala fanadinana bakalorea.Tsiahivina fa nisolo mpi­a­dina, tsy hafa fa vadiny ihany, ny iray amin’ izy roa lahy, nandritra ny laza adina matematika. Nosoloiny ny sariny ny tao amin’ny taratasim-pamantarana ilay mpiadina. Nihevitra izy fa tsy nisy nahafantatra kanjo tsikaritry ny olona. Rehefa nandeha ny fijerena ny mombamomba ilay mpiadina, tsikaritra fa to­kony ho vehivavy ilay manala ny fa­na­dinana fa tsy lehilahy. Tsy na­nan-kavaly intsony fa niaiky ny heloka nataony ity farany. Vo­alaza ihany koa fa mpampianatra Fram ny asan’ io lehilahy saika hanala fanadinana io. Ilay lehilahy faharoa kosa, saika hanolo ny toeran’ny mpiadina iray tao Mananara Avaratra nandritra ny laza adina filozofia. “Olona mitovitovy aminy indray no saika nosoloiny tamin’izay”, hoy ny Polisim-pirenena. Tsikaritra anefa tamin’ny fisavana ny sarin’ilay tena mpiadina fa tsy mitovy mihitsy aminy ny sary. Voasambotra avy hatrany ilay mpisandoka satria tsy izy ilay tokony hanala fanadinana.Henintsoa HaniL’article Maroantsetra: nidoboka am-ponja ireo roa lahy nisandoka nanala bakalorea a été récupéré chez Newsmada.